Izinqubo zokukhiqiza zaseChina zabakhiqizi ababomvu be-iron oxide nabaphakeli I-Shencai Pigment
izinqubo zokukhiqiza ze-iron oxide red
Kunezinqubo ezimbili zokukhiqiza eziyinhloko ezibomvu zensimbi oxide: ezomile nezimanzi. Namuhla sizobheka lezi zinqubo ezimbili.
1. Enqubo eyomile
Inqubo eyomile yinqubo yendabuko kanye neyasekuqaleni yenqubo yokukhiqiza ebomvu ye-oxide eChina. Izinzuzo zayo inqubo elula yokukhiqiza, ukugeleza kwenqubo emfushane kanye nokutshalwa kwemali okuncane. Okubi ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo iphansi kancane, futhi kukhiqizwa igesi eyingozi ngesikhathi senqubo yokubala, okuba nomthelela ocacile emvelweni. Njengendlela yokubala ye-jarosite, inani elikhulu lamagesi aqukethe isulfure akhiqizwa ngesikhathi senqubo yokubala.
Eminyakeni yamuva nje, kususelwa ekusetshenzisweni okuphelele kwensimbi equkethe imfucuza, ubuchwepheshe bezinqubo ezomile ezinjenge-sulfuric acid cinder indlela kanye ne-iron ore powder acidification indlela yokuthosa ezweni lethu. Izinzuzo zalezi zinqubo inqubo elula nokutshalwa kwezimali okuncane, futhi okubi ukuthi izinga lekhwalithi yomkhiqizo liphansi, elingasetshenziswa kuphela ezinkambeni ezisezingeni eliphansi, futhi inani elikhulu lamagesi ayingozi akhiqizwa enqubweni yokukhiqiza, okuthi kunomthelela omkhulu emvelweni.
2. Enqubeni emanzi
Inqubo emanzi ukusebenzisa i-ferrous sulfate noma i-ferrous nitrate, i-ferric sulfate, i-nitrate e-ferric njengezinto zokusetshenziswa, kusetshenziswa ukulungiswa kokuqala kwembewu ye-crystal, bese i-oxidation ukulungiselela indlela yokukhiqiza yensimbi ebomvu yensimbi ebomvu. Izinto zokusetshenziswa ezisetshenzisiwe kungaba i-ferrous sulfate noma i-ferrous nitrate izinto zokusetshenziswa eziqinile, noma izixazululo ezinamanzi eziqukethe i-ferrous sulfate, i-nitrate yensimbi, i-ferric sulfate ne-nitrate ye-ferric. I-neutralizer esetshenzisiwe ingaba yinsimbi yensimbi, i-scrap iron, i-alkali noma i-ammonia.
Inzuzo yenqubo emanzi ilele kwikhwalithi enhle kakhulu nokusebenza kwemikhiqizo. Izinhlobo ezingafani zochungechunge zensimbi oxide zombala zingalungiswa. Okubi kubangelwa inqubo ende, ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu kunqubo yokukhiqiza, futhi kukhiqizwa inani eliningi lamanzi amdaka ne-asidi yamanzi angcolile. Njengamanje, kukhona ukungabi bikho kwendlela esebenzayo ephelele yokusetshenziswa, enomthelela omkhulu emvelweni.
Ukufingqa, kunezinhlobo eziningi zenqubo yokukhiqiza ebomvu ye-iron oxide, lezi zinqubo zokukhiqiza ezinezinzuzo zazo ziyaqhubeka nokukhuthaza ukuthuthukiswa kwemboni yensimbi ye-oxide pigment, ukuletha lula ekukhiqizeni kwabantu.
Isikhathi Iposi: Jul-29-2020